zirconium disilicate inowanzo shandiswa musimbi ceramics, yakanyanya tembiricha oxidation inodzivirira kupfeka, yakakwirira tembiricha simbi zvinhu, muchadenga uye imwe munda
Molecular fomula 7rsi2
Iyo CAS nhamba 12039-90-6
Tsananguro pfumbu pfumbu
Kunyorera Nzvimbo 1620.C
Chakavanzika 4,88 g / cm3
Kushanda zirconium disilicate inowanzoshandiswa mune zvesimbi keramiki, yakanyanya tembiricha oxidationresistant kupfeka, hightemperature zvivakwa zvigadzirwa, aerospace uye imwe munda
Molecular uremu: 147.39
Hunhu: grey square kristaro poda
Kuwedzera (g / ml, 25 ℃): 4.88
Nzvimbo yakanyunguduka (OC): 1620
Zvimiro zveLattice: a = 0.372nm, B = 1.476nm, C = 0.367nm.
Kuchena kwekuumbwa (kJ / mol): 62.8
Basa uye mashandisirwo: anoshandiswa seyakatsvuka zvinhu hupfu hwezvakanaka zveceramics, Kukuru Mukutonga kwechiFascist kugadzirwa kwe semiconductor firimu, kabhoni zvedongo akamedura pad uye akamedura disc. Chikamu chakakura che zirconium disilicide chiri 10-15%. Kuwedzera chikamu chakakura che zirconium disilicide mu ceramic matrix composites kunogona kudzora zvakanyanya sintering tembiricha yezvinhu.
Dzidza nezvekusimba uye anisotropy ye zirconium silicide
Iwo makomponi akaumbwa nesimbi nesilicon masilicides esimbi, ayo anogona kukamurwa muzvikamu zviviri: 1. Refractory simbi yesirididhi inoreva kune periodic tafura IVB, VB, Iyo silicides yeVIB boka zvinhu, senge titanium silicide, zirconium silicide, tantalum silicide , tungsten silicide, nezvimwewo, 2 simbi yakakosha uye padhuze nesimbi yakakosha yesilicide, silicide yakanangwa, platinamu yesilide, cobalt silicide, nezvimwewo mushoko, simbi yesilide yakaomesesa zvinhu zvine metallic kubwinya, kukwirisa kwakakwira, kushora kwakanaka uye mwando coefficient, uye magnetic uye inogadziriswa yesimbi yesilide mune dzakawanda kesi Iyo ine yakanyanya kusungunuka poindi, kuomarara uye kumanikidza simba, yakakwira inokamba simba pakakwirira tembiricha, yepakati density, tensile simba uye yakanaka tembiricha mega zvimiro.
Mhinduro pakati pesimbi nesilicon inoderedza mashandiro esimbi.
Naizvozvo, iko kugadzikana kwemakemikari yesilicides kwakanaka kwazvo. Iyo Refractory simbi yesilide ine yakakwira yesilicon zvemukati ine yakanaka ngura kuramba uye oxidation kusagadzikana patembiricha tembiricha uye yakanyanya tembiricha Kukanganisika kwemakemikari: iri brittle pane tembiricha tembiricha, yakaderera kukanganisa kuomarara uye isina kukwana kupisa kwemafuta kushamiswa. Iyo yemuviri uye yemakemikari zvivakwa zvesimbi silicides inovapa iwo akawanda mashandisiro. Chekutanga pane zvese, silicides seyepamusoro-tembiricha dhizaini yezvivakwa ine yakanaka yekushandisa tarisiro mune ndege, muchadenga, indasitiri yemakemikari. Sezvo yakakwira-tembiricha oxidation inodzivirira kupfeka, magineti zvinhu, yakasanganiswa wedunhu electrode firimu uye nezvimwe zvinoshanda zvinhu, silicides yakave yakadzidzwa zvakanyanya uye kuiswa. Semuenzaniso, fe2si yakaraira chiwanikwa chine yakanakisa Soft magineti zvivakwa, zvinonyanya kushandiswa mune odhiyo, vhidhiyo uye magnetic musoro zvigadzirwa zvemakadhi kuverenga; senge v2si, CoSi2, Mo2Si, nekuda kwayo kwakanakisa magetsi kuitisa, v2si ndiyo yekutanga superconductive A15 chikamu chakawanikwa, yayo yakaoma shanduko tembiricha iri 17.1k; MoSi2 inoshandiswa zvakanyanya sechinhu chinopisa chekupisa tembiricha yemagetsi nekuda kweyekuita kwayo kwakapenya uye yakanakisa oxidation kuramba Senge yakakwira-tembiricha inodzivirira-inodzivirira kupfeka inoshandiswa muaerospace, simbi silicide inoita basa rakakosha mukugadzirwa kwemagetsi emagetsi. Nekuti kushomeka kwesilicide kwakadzikira pane kwepolysilicon, uye iko kusangana pakati pesilicide nesilicon substrate iri atomic level yakachena interface ine kuenderana kwakanaka, yave ichishandiswa zvakanyanya seSchottky barriers uye yekubatanidza zvinhu mu microelectronic yekugadzira indasitiri.
Pashure: Titanium Silicide poda, Ti5Si3
Zvadaro: Titanium Powder yeTitanium Inowedzera, Ti
Zirconium silicide Mafekitori
Zirconium silicide Fekitori
Zirconium silicide Mugadziri
Zirconium silicide Vagadziri
Zirconium silicide Mutengo
Zirconium silicide Quotes